Semalt: Torolàlana Ho an'ireo Mpanjifa Amin'ny Fampidinana Plugin WordPress
Ity fitsipika ity dia tsy maintsy ampiharina amin'ireo mampiasa WordPress.org. Ho an'ny olona mampiasa Wordpress.com, dia tsy azo atao ny mametraka plugins noho ny fetrany sasany. Zava-dehibe ny mamorona tranonkala wordpress.org izay afaka mahazo fampiasa plugins - commercial or residential appraisal. Misy fomba maro ahafahana mametraka plugin wp. Azonao atao, ohatra, ny mametraka Plugin WordPress amin'ny fikarohana ao amin'ny fikarohana karoka, amin'ny alalan'ny fampakarana azy na fametrahana plugin wp mampiasa FTP.
Araho ireo torohevitra avy amin'i Artem Abgarian, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , ary hahomby ianao.
1. Hampiditra plugin wp mampiasa WordPress Plugin Search
Ny iray amin'ireo fomba tsotra indrindra amin'ny fametrahana plugin wp dia ny fitadiavana izany ao amin'ny tranokala fikarohana. Amin'ny alalan'ity safidy ity dia afaka mahazo fidirana amin'ny plugins maro izay hita ao amin'ny lahatahiry plugin amin'ny WordPress ianao. Azonao atao ny mametraka ny fangatahana fikarohana ary mitady plugin izay mifanaraka amin'ny filanao. Rehefa mametraka azy ianao dia mampiasa azy io i WordPress ary mametraka izany ho anao. Rehefa mahomby ny dingana, dia mahazo hafatra fanamafisana ny fametahana plugin ianao. Azonao atao ihany koa ny miverina amin'ny plugin installer.
Ho an'ny plugin iray ho an'ny asa dia tsy maintsy tadidinao ny manety azy io..Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa ny plugins rehetra dia manana sehatra samihafa. Midika izany fa misy fomba maro samihafa izay takian'izy ireo mba hampiomanana azy. Ireo fomba ireo dia tsy hodinihina amin'ity torolalana ity. Ny iray amin'ireo antony ireo dia ny hoe afaka mametraka ny plugins maimaim-poana ianao. Amin'ny toe-javatra manokana sasany, mety mila mametraka plugin iray tsy hita ato amin'ity lisitra ity ianao.
2. Fidio plugin wp mampiasa ny WordPress Admin Plugin Upload
Indraindray, mety mila mametaka plugins ianao ao amin'ny tranonkalanao wp. Amin'ity tranga ity dia tsy afaka manampy anao ny fitiliana fikarohana. WordPress dia manana tolotra fanandramana ao amin'ny faritra admin izay ahafahanao mametraka plugin iray ao amin'ny konsole. Mila maka ilay plugin avy amin'ny loharano iraisam-pirenena ianao. Taorian'izany, mila miditra ao amin'ny tabilao wp-admin ianao, mandehana ao amin'ny plugins ary ampio pejy vaovao.
Hatramin'io fotoana io dia azonao atao ny manindry ny bokotra plugin. Ampio ity rakitra ity ao amin'ny lahatahiry PC. WordPress dia mandefa sy mametraka ity plugin ity ho anao. Tahaka ny fomba fanao etsy ambony, aorian'ny fametrahana ny fahombiazanao, azonao atao ny mametaka ny plugin na miverina ao amin'ny pejy plugins. Ny fomba fiasa rehetra dia mahazatra amin'ny famolavolana ny plugin.
3. Mametraka Plugin WordPress amin'ny FTP
Amin'ny fotoana manokana, ny mpandraharaha tompona fampiantranoana wp dia mety hanana fepetra voafetra izay mety hametra ny fahafahanao mametraka plugin iray avy amin'ny faritra admin. Amin'ity tranga ity, ny fametrahana plugin wp amin'ny alalan'ny FTP no safidy tsara indrindra. Na dia ireo mpikamabatra aza dia afaka mifehy mora foana ny mpandrindra FTP. Voalohany indrindra, tokony haka sy haka ny zip ny plugin eo amin'ny solosainao. Hatramin'io fotoana io, mety mila mandefa ny plugin amin'ny mpizara wm fampiantranoana amin'ny fampiasana mpanjifa FTP ianao. Ny mpanome mpampiantrano anao WP dia afaka manolotra mpandrindra FTP ho an'ny tranonkalanao. Indray mandeha any amin'ny mpitantana ny FTP, azonao ampidirina ao amin'ny làlana / wp-content / plugins / directory an'ny mpizara.